ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ကျွန်မ ကြောက်တဲ့ ဗီယက်နမ် : ရီရအောင်လားဟယ်
Posted by ကြည်ကြည် at 7:01 AM
မင်းဒင် July 1, 2011 at 7:28 AM
ဗီယမ်နမ်မှာဆို သီလရှင်ဖြစ်ပြီ ။
ညိမ်းနိုင် July 1, 2011 at 7:55 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 1, 2011 at 7:56 AM
တော်သေးတယ် ကျွန်မလည်း ဗီယက်နမ်မှာ သွားမဖြစ်တာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် သူပြောသလို ယောက်ျားရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲလေ ခုလည်းမြန်မာမှာလည်း မရပါဘူး။ မထူးပါဘူးနော်း)
san htun July 1, 2011 at 9:05 AM
ဗီယက်နမ်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ယောက်ျားလေး ရှားပါးပါသတဲ့။ မမကြည်ရဲ့ဗီယက်နမ်မတော့ အစားအသောက် သောင်းကြန်းလားတော့ မသိဘူး စန်းထွန်းရဲ့ဗီယက်နမ်မနှစ်ယောက်ကတော့ အစားအသောက် သောင်းကြန်းလွန်းလို့သြချရတယ် ...:P
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! July 1, 2011 at 10:28 AM
မမရဲ့ ပို့စ်လေးကြောင့် မြန်မာမလေးဖြစ်ရတာ ..ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်.. :):)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) July 1, 2011 at 10:34 AM
တူရာတန်ရာတော့ ရတတ်ကြပါတယ်။း)))))
ချစ်ကြည်အေး July 1, 2011 at 5:39 PM
ဘုရား ဘုရား...တို့လည်း အိမ်ကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောအုန်းမှပါ....။ ဒါထက် တို့အကိုကြီးကို အညာသားလို့ပြောတာတော့ မယ်ညို ညည်းလွန်တယ်အေ....:)))
ဆောင်း July 2, 2011 at 12:51 AM
ဒါဆိုရင် ဒို့ ရဲ့ဗထက်ချိုင့်မလေးက တော်တယ် တရားမျှတတယ် တဖက်သား ကို နားလည်ပေးတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာ သနားတတ်တယ်။ စေတနာရှိတာ မိုလို့ဒို့ သူငယ်ချင်းမလေးကို ပိုခင်သွားပြီ။
များသောအားဖြင့် ဗ တွေက တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ မဆန်းဘူး။ ၁၉၇၂ လောက်မှာ စစ်ဖြစ်နေတော့ စစ်အတွင်းမှာ အစားသောက်က အစ ကိုယ်စားရဖို့ ဘဲ အခြေနေဖြစ်နေတော့ ကိုယ့်အတွက်သာ စဉ်းစားကြတယ်။ ကွန်မြူနစ် ဆိုတော့ ကြမ်းတာ မဆန်းဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ ဗတွေက စည်းလုံး ညီညွတ်တယ်။ သူတို့ လူတွေ အလုပ် ရအောင် ကူညီတယ်။
ကြည်ကြည် July 2, 2011 at 1:37 AM
ဆရာမင်းဒင် .. သီလရှင်တော့မလုပ်ဘူးဆရာ ရရာယူမှာပဲ ...း)
မောင်ညိမ်း.. ဒီမှာတော့ အဲ့လိုမကဲဘူးကွယ့် သူတို့
မချော . အို ..မယူတာများ မသိတာကြလို့
မစူးနွယ် ..ကျေှးဇူးမ ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မကောင်းလို့အဲ့ပို့စ်ဖြုတ်ပြီး ဒီပို့စ်ပြန်တင်တာ။း)
သူကြီးရေ မရပါဘူး မယ်ရုပ်ဆိုးလည်း လွင်မိုးတော့မှန်းတာပေါ့အေ
မမချစ် ....ဦး ၃ ကြိမ်ပါ ကတော့ကွာ ဟိဟိ
ကိုကို စန်းထွန်း အဲ့လေ ညီမလေးစန်းထွန်း .. အင်းအစားအသောက်ဆိုသူတို့နံပတ်တစ်
မဆောင်း ခုကြည်ကြည်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်မလေးလည်းမဆိုးဘူး တစ်ဝက်တစ်ဝက်ပေါ့ကွယ်.. သူတို့လည်း တို့လို့ မြန်မာမကို ပြန်ပြီးဘလော့ရေးနေလောက်ပါပြီလေ
ဟန်ကြည် July 2, 2011 at 6:20 AM
ဟ...ဗီယက်နမ်က သကောင့်သားတွေ တယ်လည်းဘုန်းကြီးပါကလား...ပြောလည်းပြောချင်စရာ...သူတို့ပုံတွေက တစ်စက်ကလေးမှ ခန့်ခန့်ညားညား မရှိဘဲနဲ့ဗျာ...
မော်ကွန်းသစ် July 2, 2011 at 10:17 AM
အင်း ဖတ်လို့တော့ကောင်းသား...ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင် ယောက်ျားမရဘူးတဲ့လား..။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားဖြစ်အောင် ဆုတောင်းရင်ကောင်းမလား..။ဘုန်းကြီးဝတ်ရတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ.. ကျန်းမာပါစေ...။
မိုးယံ July 2, 2011 at 11:31 AM
ဟာ...ဒေါ်လေးကလည်း ဂျပန်မှာ ကားတွေအရမ်းများတယ် ယာဉ်စည်းကမ်းလိုက်နာ.....
မြန်မာမ ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် သံသရာရှည်မယ်ဆိုရင်တောင် မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းသင့်တယ် (သာသနာကြောင့်)
ဒါနဲ့ အညာသားကျောကုန်း(မုန့်)သာ စားဖူးပြီး အန်တီညိုရဲ့ အညာသားကြီးကိုတော့ မြင်ဖူးချင်တာဗျ။
မှတ်ချက် (ပိတ်ရန်၊ ဖျက်ရန် အလိုမရှိ)
ကြည်ကြည်ညိုလို့ပဲ ပြောင်းလိုက်တော့မယ်.း)
ချစ်ခြင်းအလင်္ကာ July 3, 2011 at 10:46 PM
saw July 4, 2011 at 1:19 AM
သူတို့ က သူများလူ ကိုယ့်ကို တန်းတန်းစွဲးနေရင်ကို ဂုဏ်ယူနေတာဆို။
ဟား ဟ ရေစက်ပါရင် ရပါတယ်လေ။ စိတ်ပူစရာ မဟုပ်ပါဘူး။
Pai Kim Em December 14, 2011 at 11:19 AM
မပြောကြပါနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော့မိန်းမက ဗီယက်နမ်သူဖြစ်နေလို့ပါ။ ဟီး။ သူလဲမြန်မာကယောက်ကျားလေးများရအောင်ယူလိုက်သလားမသိဘူး။ ခွိ....
မမ .. မမရဲ့ ဗီယက်နမ်က တော်တော်ချောလို့လား ဟင်။်မြန်မာနိင်ငံကိုမသိတာတော့ဆိုးပါတယ်နော်။